သံလြင္: ပြည်-ရန်ကုန် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ခတ်ထားသည့် အုတ်တံတိုင်းအား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဟုဆိုသူက ဖြိုချဖျက်ဆီး
ပြည်-ရန်ကုန် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ခတ်ထားသည့် အုတ်တံတိုင်းအား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဟုဆိုသူက ဖြိုချဖျက်ဆီး
ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်းအတွက် မြန်မာ့မီးရထားကခတ်ထားတဲ့ အုတ်တံတိုင်းကို ဒီမိုကရေစီအရေး စဉ်ဆက် မပြတ်လှုပ်ရှားမှု အင်အားစုအဖွဲ့(MDCF)က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုတဲ့သူက ဖြိုချဖျက်ဆီး လိုက်ပါတယ်။
ပြည်မြို့၊ ရှားရုံရပ်ကွက်က မီးရထားလမ်းဘေးရှိ မြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့ အိမ်နေရာတွေရဲ့ဘေးကို မြန်မာ့မီးရထားက ပြည်-ရန်ကုန် မီးရထားလမ်းပိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်းအတွက် အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အုတ်တံတိုင်းခတ်တာကို ရထားလမ်းဘေးမှာနေထိုင်သူတွေကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့လက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အုတ်တံတိုင်းကို ဖြိုချတဲ့(MDCF)က ဒုတာဝန်ခံဦးတင်မောင်ကြည်ကတော့ ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တာကြောင့် ဖြိုချတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မီးရထားလမ်းဘေးမှာနေထိုင်တဲ့ ဒေါ်မြအေးကလည်း အခုလိုအုတ်တံတိုင်း ခတ်တဲ့အတွက် နေထိုင်သွားလာရတာ အခက်အခဲရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ့မီးရထားက ရထားလမ်းဘေးမှာနေသူတွေဆီကနေ ခွင့်တောင်းအကြောင်းကြားတာမရှိဘဲ အုတ်တံတိုင်းခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အခုလို အုတ်တံတိုင်းဖြိုချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာ့မီးရထားမြို့ပြဌာနက လုပ်ငန်းအုပ်ဦးတင်ထွန်းကတော့ အထက်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြထားပြီး သက်ဆိုင်သူကိုအရေးယူပေးဖို့ ပြည်မြို့ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရှားရုံရပ်ကွက်ဟာ အရင်က ရေဝပ်တဲ့ဗွက်တောကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာကိုပြုပြင်ကာ အိမ်တွေဆောက်လုပ် နေထိုင်လာကြတာ နှစ်ပေါင်း (၈၀)လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အိမ်ခြေ (၄၀) ကျော်နဲ့ အခုချိန်ထိအမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်-ပြည် ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တာအပါအဝင် ရထားလမ်းတစ်လျှောက် အုတ်တံတိုင်းခတ်သွားမယ့် စီမံကိန်းကတော့ ADB ဘဏ်အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ မတိုင်ခင် အပြီးဆောင်ရွက်သွားရမယ့် စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်း - အောင်ကျော်သူ
at 10/08/2019 03:34:00 PM
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ကြားကာလအစီအစဉ်များအပါအဝင် အ...
ပြည်-ရန်ကုန် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ခတ်ထားသည့်...
မန္တလေးမြို့တွင် ဖောက်ကွဲရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ...
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ရုံးပိတ်ရက်ကာလများအတွင်း ချောင်...
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမြှင့်တင်ရန် YMBA ရာသက်ပန် ဂုဏ်...
သားနှစ်ယောက်အတွက် အမှန်တရား တရားရုံးတွင် အကုန်ချပြ...
မဟာမုနိဘုရားကြီးတွင် သုံးလကျော်အတွင်း နိုင်ငံခြားသ...
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ...
ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်က အတိုက်အခံအုပ်စုကို စစ်တပ...
ပထမအကြိမ် မြန်မာကော်ဖီပွဲတော်-၂၀၁၉ မန္တလေးမြို့တွင...
မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း လွဲမှားမှု ကိစ္စ မေးခွ...
ရွှေလုပ်ငန်းသည် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖ...
နိုင်/ကျဉ်းတို့ရဲ့ နားခိုရာစီမံကိန်းအတွက် နိုင်/ကျ...
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ သိမ်းဆည်းခံမြေများ လျှော်ကြေးပ...
ကလေကဝနဲ့တက်လာသောသူများမိမိတို့ပါတီ၌ မရှိကြောင်း ပဲ...
ရှေ့နေတစ်ဦး မိမိကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲချ သတ်သေ
မန္တလေးမြို့တွင် အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း စာများပါသည...
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း တာဝန်ရှိသူကို အမှုပြန်ဖွ...